I-HTC diamond pads Abakhiqizi Nabahlinzeki | I-China HTC diamond pads Factory
Izicathulo Zokugaya ze-HTC ezinama-Double Bar Segment
I-double bar diamond grinding shoe isibe amathuluzi okugaya amadayimane adume kakhulu ekugayeni ukhonkolo. Isizathu sokuthi bangakwazi ukumboza umkhawulo wesithombe esiyisikwele ngezindleko eziphansi kakhulu. I-double bar ye-HTC idayimane yokugaya isicathulo singasetshenziswa somile futhi simanzi, isibopho saso siyahlukahluka kokuthambile kuye kokuqina.
I-HTC Arrow Segments Izicathulo Zokugaya Ukhonkolo
Izicathulo zomcibisholo zinengxenye enomkhawulo obukhali ohamba phambili wokusika, ukugaya nokukhipha ngesikhathi esifanayo. Kanye namadayimane awo amaholoholo, lokhu kuwenza abe nolaka, futhi alungele ukususwa kweglue nokususwa ngokushesha kwezingqimba eziwugqinsi. Ukubekwa kwengxenye nakho kuvumela impilo ephezulu.
Izicathulo Zokugaya ze-HTC ezinamaSegmenti ane-Double Hexagon
Izicathulo zokugaya idayimane ze-HTC zisetshenziselwa izigayi zekhonkrithi ze-HTC zaphansi, zingasetshenziswa kukhonkolo osayizi omkhulu, i-terrazzo floor ukuze kukhishwe i-epoxy, i-coating kanye ne-glue kuyo. Ukusebenza okuhle futhi kulula ukuyisebenzisa. Ifomula enhle yenza ukuqina, ubukhali kanye nenani elifanele.
Imicibisholo emibili yedayimane amasegimenti e-HTC amaphiko okugaya
Amasegimenti edayimane emicibisholo emibili , anolaka lokugaya zonke izinhlobo zamaphansi kakhonkolo athambile, aphakathi nendawo futhi aqinile. Futhi ingasusa ezinye izimbobo ze-epoxy ngaphandle. Izinhlobo ezehlukene zebhondi yensimbi yokuqina okuhlukene kokhonkolo floor.Siphinde sihlinzeke ngezinsizakalo zokwenza ngokwezifiso ukufeza noma yiziphi izimfuneko ezihlukile.
Ipuleti lokugaya idayimane eliphindwe kabili le-HTC
2 amasegimenti edayimane elingunxande, ukugaya okunolaka kuzo zonke izinhlobo zezindawo zaphansi: ukhonkolo, i-terrazzo, igranite, imabula, njll.Ukugaya okuphezulu nempilo ende. Ifanele ukugaya okusheshayo kanye nolaka ngokhonkolo namatshe.Ama-grits ahlukene namabhondi ensimbi ayatholakala ukuze enze.
I-HTC Ez Edume Kakhulu Yokushintsha I-Diamond Metal Bond Yokugaya Amaphedi Ephansi Lokhonkolo
Lezi zicathulo zokugaya idayimane zenzelwe i-HTC grinder yaphansi, efanelekile ukugaya ukhonkolo kanye nephansi le-terrazzo, futhi ingasetshenziswa ukususa i-epoxy encane, upende, iglue ebusweni. Amagrits 6#~300# ayatholakala.